विश्व मुर्ख दिवस | Hamro Patro
बिहानको ०४ : ५०
विश्व मुर्ख दिवस
विश्व मुर्ख दिवस विशेष अडियो सामाग्री
अप्रिल १, २०१८
आज मिती विसं २०९८ साल मंसिर १ गते, पूर्व मेची वाट पश्चिम महाकाली चल्ने द्रुत रेलमार्गवाट भर्खरै ईलामवाट रेल चढेर म काठमाडौ अफिस भ्याउन ९ बजे विहानै आईपुगेको छु । नेपालले विश्वकप फुटबल जितेको समाचार त तपाँईले थाहा पाईहाल्नुभयो होला, अनि आज भर्खर विदेशमा रहेका नेपाली दुतावास अगाडी विदेशी हरुको प्रदर्शन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपाली भिसा लिन अत्यन्त गाह्रो भएको उनिहरुको गुनासो छ ।
हाहा पत्याउनुभयो । नेपालको सर्वाधीक डाउनलोड भएको मोबाईल एप्स हाम्रो पात्रो आज अप्रिल फूल अर्थात विश्व मुर्ख दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छ, हाम्रा सबैजना प्रयोगकर्ताहरुलाई । अप्रिल फूल अर्थात अप्रिल महिनाको प्रथम तारीख, आज विहानै देखि विभिन्न बहानामा झुक्याउने, ठट्टा गर्ने अनि रमाईलो गर्ने चलन छ है । सावधान रहनुहोला, विहानै गोठमा भएको गाई फुकेर पारी गाँउमा अर्काको कान्लामा चर्दै छ भनेर सुनाएको भरमा हाम्रा गाँउका माईला बाजे आफ्नो गोठ नहेरि सखारै दोडिएछन् । बुढो ज्यान, थाकेको शरीर तर पनि दुहुनो गाई हराउला भन्ने तर्कना, त्यस वर्ष बाजेलाई अप्रिल फूलले विहान विहानै छोएको थियो ।
रमाईलो आफ्नो ठाँउमा छ तर यसका नराम्रा पक्षहरु पनि आफ्नै ठाँउमा छ । अप्रिल फूललाई बेमौसम मजाकको गैरजिम्मेवार भाँडो मान्ने केही अबुझहरुका कारणले अप्रिल फूलको नमिठो याद पनि भएको हुनसक्छ । ज्यूँदै मान्छेलाई मर्यो भन्ने अफवाह फैलाईदिने, नभएको विपत्ति आईलाग्यो भनेर हल्ला मचाईदिने अनि अन्य कुराहरुमा हाहाकार मचाईदिने भने यस दिनका नराम्रा पाटाहरु हुन् । हाम्रो पात्रो प्रयोगकर्ता तपाई भने सचेत रहनुहोला ।
यो अप्रिल फूल किन मनाउन थालियो भन्ने विश्वासिला कारणहरु भेटिदैन् । बोस्टन यूनिभरसिटीका प्राध्यापक जोसेफ बस्किनका अनुसार रोमन राज्यमा कन्सटेनटाईनको शाषन रहेका वेला, आजकै दिनमा कैदि एवं अपराधीरुलाई एक दिनका लागी राज्य चलाउन दिईएको थियो । यसै दिनको संभmनामा हरेक वर्ष अप्रिल फूल अर्थात मुर्ख दिवस विश्वभरि मनाउन थालिएको मान्यता छ । लगभग यसै समय आसपासमा हिन्दु चन्द्र क्यालेण्डरमा होली, ज्वीस अर्थात यहुदीहरुको क्यालेण्डरमा पुरीम र रोमनहरुको क्यालेण्डरमा अतिस पर्व पर्दछन् । मार्चको मध्यवाट र अप्रिलको प्रथम साता विचमा यी पर्वहरु पर्ने गर्दछन् । बसन्त क्रृतुको आगमनको स्वागतार्थ अप्रिल फूल एउटा महत्पूर्ण दिन हो, हामीमध्य धेरैको संझना अप्रिल फूलसँग जोडिएको हुनसक्छ, हैन र ?
ईतिहास र चलनहरु नियाल्ने हो भने अप्रिल फूलले सन् १७०० पछाडी विश्वब्यापी रुप लियो जब अँग्रेजी हास्य लेखक अनि कलाकारहरुले यसलाई अभिब्यक्त अनि आआफ्ना रचनामा उतार्न थाले । बेलायती, स्पेनिश, पोर्चुगिस अनि नेदरल्याण्डको उपनिवेशको वुद्धि सँगै मान्यता पाँउदै गयो ।
सन् १९५७ मा त बिबिसी ले नै स्वीस किसानहरुले रुखवाटै चाउचाउ टिपेको भिडियो देखाईदिएर आजको दिन संसारलाईनै नयाँ वाली आयो भनि झुक्काएको थियो । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले पनि आजो दिनमा डर त्रास फैलाउने भन्दा पनि आशालाग्दा भ्रम अनि खबर फैलाएर आजको दिन मनाउदछन् ।
विधालयमा छँदा साथीहरुको पछाडी कागजको पुच्छर जोडिदिने, ट्वाईलेटमा थुनिदिने, ब्याग र कापीहरु लुकाईदिने, पेन भित्रको रिफिल लुकाईदिने, खाली चकलेटको खोलमा मसिनो पत्थर राखेर दुरुस्त चकलेट जस्तो बनाएर बाटोमा छाडिदिने जस्दा धेरै क्रियाकलापहरु गरेका यादहरु पनि छन नि , कि कसो ?
मुर्ख र सज्जन एक्आपसमा वाँझिएका शब्दहरु हुन् । आज मुर्ख दिवस हो , विश्व मुर्ख दिवस् । आत्मसाथ गरौ, कालिदासको ज्ञान अनि काब्यलाई तर स्मरण गरौ उनि पहिले कति मुर्ख थिए भन्ने कुरा । बाल्मीकीलाई संभmना गरौ जो पहिले रत्नाकर डाँकु थिए अनि हामी आफैलाई याद गरौ न ।
बच्चामा गरेका मुर्ख कामहरु लाई, मुर्खपना नराम्रो हैन तर यसवाट सिक्न अनि अगाडी वढ्न जरुरी छ । आज बोलेका झुठ या मुर्ख बनाउने शब्दलाई चोट नपूर्याओस्, मुर्ख वनाउनुहोस तर हसाउन नभुल्नुहोस् । अप्रिल फूल हाउसफूल होस् ।
हाम्रो पात्रोको लागी सुयोग ढकाल